'सोसिएल मिडिया चिरफारमा Social Bakers' | मेरो कलम
‘सोसिएल मिडिया चिरफारमा Social Bakers’
Nepali May 16, 2013
– “नेपालमा फेसवुक यति लाखले चलाउछन् ,सवैभन्दा वढी लाईक पाएको पेज यो हो, ट्वीटरमा यसको फलोअर्स यति छन् , युट्युवमा सवैभन्दा वढी भिडियो यो पो हेरिएको छ” लगायतका जानकारी/समाचारहरु तपाईले पत्रपत्रिका तथा अनलाईनवाट पढ्दै आउनुभएको होला । खासमा ती जानकारी कसरी खोजकर्ताले सहजै पत्ता लगाउछन् भन्ने पनी त लाग्न सक्छ । यस्तै जिज्ञासा तपाईमा छ भने यो थाहा पाईराख्नुस् कि वढीभन्दा सामाजिक सञ्जालसगँ सम्वन्धीत तथ्याकंहरु socialbakers.com वाट निकालिएको हुन्छ ।
सोसिएल वेकर्सले सन् २००८ देखी सोसिएल मिडियाको विश्लेषण तथा लेखाजोखा गर्ने काम गर्दै आईरहेको छ । यसले निर्माण गर्ने तथ्याकंलाई ठुला-ठुला कम्पनी तथा सस्थाहरुले पनी आधिकारीक मान्ने गरेका छन् । सोसिएल वेकर्सले फेसवुक, ट्वीटर, लिकंदिन, युट्युव एवं पछिल्लो समयमा आएर गुगल प्लसको वृहत विश्लेषण तथा साविस्तार तथ्याकं प्रस्तुत गर्ने काम गरिरहेको छ । सोसिएल मिडिया सम्वन्धी अध्ययन तथा मार्केटिङ गर्नेहरुको लागी सोसिएल वेकर्स नै हालसम्म एकमात्र उपयोगी साईट हो ।
सुरु गर्ने हैन ?
सोसिएल वेकर्स डटकममा जानुस् । कुन सञ्जालको वारेमा जानकारी लिन चाहुदै हुनुहुन्छ ? तपाईले तुरुन्तै तथ्याकं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । तथ्याकंका साथसाथै प्रयोग दर घटवढ के कस्तो छ । कुन देशवाट के कति प्रतिशत मानिसहरु सक्रिय भएका छन्, महिला कती, पुरुष कती, कुन उमेर समुहका व्यक्तिहरु छन् लगायतका जानकारी सहजै पाउन सक्नुहुन्छ ।
भिडियोमै हेर्नुस् , सोसिएल वेकर्सले कसरी सोसिएल मिडियाको तथ्याकं हसजै प्रस्तुत गर्छ त ?
मोबाईल हरायो ? ‘नो टेन्सन’
Nepali December 23, 2013
यो तपाईकै फोटो हो ?
Nepali June 7, 2013
ईन्टरनेटमा पासवर्ड विर्सिनुभयो ? ‘नो टेन्सन’
Nepali June 8, 2013
स्काईप चलाउनुहुन्छ ?, “यस्ता रहस्य थाहा पाईराख्नुस्”
Nepali May 31, 2013